ဈေးကွက်အရင်းအနှီးမှဇွန်လ ၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါး ၁၀ ခု DeFi ဒင်္ဂါးပြား ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုအကောင်းဆုံး DeFi Coins - Deficoins.io
DAO တိုကင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Curve
ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြား ၁၀ ခု
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေး (DeFi) ဈေးကွက်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း crypto-enthusiast များမှစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာအနှံ့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ DeFi သည်အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည့် blockchain technology တွင်တည်ဆောက်ထားသောဘဏ္applicationsာရေးဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများအတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများကိုဗဟိုမှထိန်းချုပ်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ယနေ့ DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်ကုန်သွယ်ရေး၊ ချေးငှားခြင်း၊ ချေးငှားခြင်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အခြားအရာများအထိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တိုကင်များကိုသူတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အသုံးပြုသူများကိုမက်လုံးပေးရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤဆန်းသစ်သောစျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုစောစောစီးစီးစိတ်ဝင်စားလိုပါက - DeFi ဒင်္ဂါးများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
DefiCoins.io တွင်ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးအချို့ကိုကြည့်ပြီး DeFi ဂေဟစနစ်အတွင်းသူတို့၏အခန်းကဏ္studyကိုလေ့လာသည်။ DeFi ဒင်္ဂါးများကိုသင့်အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်ကော်မရှင်မပေးဘဲမည်သို့ ၀ ယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းရှင်းပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းပွဲစားနှင့်အတူ DeFi Coins များကိုဝယ်ပါ
10 အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြား 2021
လူကြိုက်များလာခြင်းနှင့် DeFi ပလက်ဖောင်းအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကြောင့် DeFi ဒင်္ဂါးပြားများ၏စာရင်းသည်အမြဲတမ်းကြီးထွားနေသည်။ စာရေးသားနေစဉ် DeFi စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏စုစုပေါင်းစျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၁၁၅ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသည်၊ အထူးသဖြင့် DeFi ဖြစ်စဉ်သည်မည်မျှငယ်ရွယ်ကြောင်းသင်စဉ်းစားသောအခါ။
ဤသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစျေးကွက်၏မြင့်တက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြား ၁၀ ခု၏စာရင်းဖြစ်သည်။
၁။ Uniswap (UNI)
Uniswap သည် DeFi စျေးကွက်ကိုလက်ရှိလွှမ်းမိုးနေသောဗဟို ဦး စီးစနစ်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ site ပေါ်တွင် ERC20 တိုကင်များအလုံအလောက်ငွေအလုံအလောက်ရှိစေရန်၎င်းသည် Automated Market Maker system (AMM) ကိုအသုံးပြုသည်။ Uniswap protocol သည်၎င်း၏ crypto-asset ဖြေရှင်းချက်များအရတည်ကြည်သောနောက်လိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကသော့များအားလုံးကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်၊ ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးသင့်အားဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
UNI ၏အမှတ်အသားကိုစက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် Uniswap protocol ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် USERS ကိုဆုချရန်ဖြစ်သည်။ DeFi အကြွေစေ့သည်စျေးကွက်ထဲသို့ဒေါ်လာ ၂.၉၄ ဒေါ်လာဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်အတွင်း - အကြွေစေ့၏တန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၃၅.၈၀ အထိမြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ DeFi အကြွေစေ့သည်ရှစ်လအတွင်းအမြင့်ဆုံး ၁,၁၀၀% ကျော်ဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နိမိတ်လက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်အရအကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ပေါက်စျေးဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ သင် UNI ကို ၀ ယ်သည့်အခါ Uniswap protocol တွင်မက်လုံးနှင့်အထူးလျှော့စျေးများလည်းသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ UNI ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏပေါ် မူတည်၍ သင်သည် Uniswap ဂေဟစနစ်အတွက်အဆိုပြုထားသောမူဝါဒအမျိုးမျိုးကိုသင်မဲပေးနိုင်လိမ့်မည်။
Uniswap ပရိုတိုကောသည် UNI တိုကင်များအား ၄ င်း၏ခွဲဝေချထားရန်အတွက်လေးနှစ်အစီအစဉ်နှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းအကြွေစေ့ ၁ ဘီလီယံအနက် ၆၀% ကို Uniswap အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လျာထားသည်။ DeFi အကြွေစေ့သည် Capital.com ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသော cryptocurrency platform များပေါ်တွင်ကုန်သွယ်ရန်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
ယခု Uniswap ကိုဝယ်ပါ
၅။ Chainlink (LINK)
Chainlink သည် DeFi စျေးကွက်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော Oracle ကွန်ယက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်ဒေတာများကို blockchain ရှိ smart contract များသို့ကျွေးမွေးသည်။ crypto DApps အကြားမကြုံစဖူးအချက်အလက်ပမာဏအကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းပံ့ပိုးသူသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား LINK ကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်များစွာအသုံးဝင်သောအသုံးအဆောင်များရှိသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားခြင်းမရှိသောပလက်ဖောင်းများ၏လူကြိုက်များမှုကြောင့် Chainlink သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ချိန်မှစပြီးသိသိသာသာကြီးထွားမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Chainlink ဂေဟစနစ်အတွက်တန်ဖိုးရှိနိုင်သောအခြား crypto အစပျိုးမှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည့်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဈေးကွက်အရင်းအနှီးအရ LINK သည်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ DeFi ဒြပ်စင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ DeFi အကြွေစေ့ $ 14 ၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူ 2021 ဝင်ကြ၏။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ inပြီလတွင်စာရေးချိန်၌ LINK ၏တန်ဖိုးသည် All-time Highs ကိုဒေါ်လာ ၄၄.၃၆ အထိရရှိခဲ့သည်။ လူအများကဤမြှင့်လာသောလမ်းကြောင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဆက်လက်တည်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
နှစ်များတစ်လျှောက် Chainlink သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်း၏ DeFi ပလက်ဖောင်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြည့်နေစဉ် LINK သည်အခြား DeFi developer များကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ဤရှုထောင့်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ LINK အမှတ်အသားသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ DAI (DAI)
သတိမထားမိသောသူများအတွက်၊ cryptocurrencies နှင့် DeFi ဒင်္ဂါးများ၏အခြားငွေကြေးစျေးကွက်သည်မတည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုရှောင်ရှားရန်ရှာဖွေနေကြသူများအတွက် DAI အကြွေစေ့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် DeFi crypto အကြွေစေ့ကို Ethereum blockchain ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားပြီးသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ DAI သည်ပထမဆုံးသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချ။ အပေါင်ပစ္စည်းကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဒီ DeFi အကြွေစေ့ကိုအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ MakerDAO ပရိုတိုကောလ်ကတီထွင်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များတည်ဆောက်ရန်စမတ်စာချုပ်များကိုအသုံးပြုသောအကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် DAI သည်စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံရှိပြီး၎င်းသည်စောင်ရေထဲတွင်အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်သည့်အခြားငွေကြေးတန်ဘိုးငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ DAI လောင်းခြင်း၏အဓိကအားသာချက်မှာပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် cryptocurrency စျေးကွက်များ၏အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ထိတွေ့နိုင်မှုအန္တရာယ်ကိုကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် FII ငွေကြေးအစား DAI ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငွေကြေးစျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသည့်အခါငွေပေးချေမှုစရိတ်နှင့်နှောင့်နှေးမှုကိုလျှော့ချရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် DAI သည်အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းအတွက်နောင်လာမည့်နှစ်များအတွင်းကြီးမားသောအရာများမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ယခု DAI ကိုဝယ်ပါ
0x သည် DeFi protocol တစ်ခုဖြစ်ပြီး developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် decentralized cryptocurrency exchanges များကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ERC20 တိုကင်များကိုအလွယ်တကူကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော non-custodialial DEX ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ထင်ရှားသောခြားနားချက်မှာ ERC20 တိုကင်များကို၎င်း၏အထောက်အပံ့နှင့်အတူ 0x လဲလှယ်မှုသည်လည်း ERC-721 crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ဒီဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများစွာကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် open-source 2017x protocol သည် 0x (ZRX) အကြွေစေ့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အခြားထိပ်တန်း DeFi ဒင်္ဂါးများကဲ့သို့ ZRX အကြွေစေ့သည် Ethereum blockchain ပေါ်တွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ မူလက၎င်း၏ဂေဟစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်0ခုနှစ်တွင် - 2019x အကြွေစေ့ထိုကဲ့သို့သောငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးသူများအတွက်အစုရှယ်ယာစွမ်းရည်အဖြစ် utility ကိုပိုမိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
0x သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစတွင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာ DeFi အကြွေစေ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင်ဒေါ်လာ ၂.၃၃ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ၅၀၀% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ။ အကယ်၍ သင် 2021x protocol ကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားပါကဤ DeFi အမှတ်အသားကိုဗဟိုနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများမှကုန်သွယ်နိုင်သည်။
Maker (MKR) သည် MakerDAO ပရိုတိုကောတွင်အဖွဲ့မှတီထွင်ခဲ့သောအခြား DeFi အကြွေစေ့ဖြစ်သည်။ DAI တည်ငြိမ်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ရည်ရွယ်သည်နေစဉ်, Maker အကြွေစေ့၏ရည်ရွယ်ချက် utility ကိုလက္ခဏာသက်သေအဖြစ်အစေခံရန်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ MKR DeFi တိုကင်သည် DAI ၏တန်ဖိုးကို ၁ ဒေါ်လာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းကိုရရှိရန်စျေးကွက်ကျယ်ပြန့်သောစျေးနှုန်းအတက်အကျကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ဖန်တီးသူအကြွေစေ့ကို ဖန်တီး၍ ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။
MKR ၏ကိုင်ဆောင်သူများသည် DAI stablecoin နှင့်သက်ဆိုင်သောလမ်းညွှန်ချက်များကိုပြုပြင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သင် Maker တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကသင်သည် MakerDAO ဂေဟစနစ်တွင်မဲပေးခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် MakerDAO ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သင့်အားပါ ၀ င်မှုအတွက်မက်လုံးများကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။ စျေးကွက်အရဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျော်ရှိသည့် Maker သည် crypto ဈေးကွက်ရှိ DeFi ဒင်္ဂါး ၁၀ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ DAI သည် cryptocurrency trading arena တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက Maker DeFi အကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းကိုလည်းထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်။
ယခု Maker ကိုဝယ်ပါ
Compound သည်သုံးစွဲသူများအား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာစေသည့်ဗဟို ဦး စီးချုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိသောချေးငှားခြင်းနှင့်ချေးငှားခြင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းသည် Compound ငွေဖြစ်လွယ်မှုရေကန်များစွာကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိုကဲ့သို့သောရေကန်များထဲမှတစ်ခုထဲသို့သွင်းလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည် cTokens များကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူလိုပါကဤ cTokens များကိုသင်ရွေးယူနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် cTokens ၏ငွေလဲနှုန်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တွင်လည်းအတိုးရနိုင်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင် Compound သည်၎င်း၏ဇာတိလက္ခဏာဖြစ်သော COMP ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီ DeFi တိုကင်ကိုကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် Compound protocol မှမဲပေးခွင့်ကိုရရှိနိုင်သည်။
ပလက်ဖောင်းသည်စျေးကွက်တွင်ဆွဲဆောင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီး၎င်း၏ DeFi အကြွေစေ့သည်မကြာသေးမီကစျေးကွက်တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ဒြပ်ပေါင်းသည် $3စျေးနှုန်းဖြင့် ၂၀၂၁ တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Defi အကြွေစေ့သည်ဒေါ်လာ ၆၃၈ ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလေးလမျှအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးနောက် Compound သည် ၃၅၀% ကျော်ပိုမိုများပြားလာသည်။
Aave သည် open-source DeFi ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး crypto lending service တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောငွေဖြစ်လွယ်မှုဆိုင်ရာပရိုတိုကောသည်သင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတိုးများရရှိရန်နှင့်ငွေချေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီ DeFi ပလက်ဖောင်းကိုပထမ ဦး ဆုံး 2017 ခုနှစ်တွင် cryptocurrency စျေးကွက်မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ပလက်ဖောင်းအား ETHLend ဟုခေါ်ပြီး LEND အား၎င်း၏ဇာတိလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ငွေချေးသူများနှင့်ငွေချေးသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အဓိကအားဖြင့်ပွဲစဉ်ပြုလုပ်သည့်စနစ်အနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် DeFi ပလက်ဖောင်း Aave အမည်ပြောင်းခဲ့သည် - အသစ်သောချေးငွေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ်ထည့်သွင်း။
ယနေ့ AAVE အကြွေစေ့ကို၎င်း၏ protocol နှင့်လုံခြုံမှုကိုအထောက်အကူပြုရန် protocol မှတဆင့်လောင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Aave ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လောင်းကြေးများနှင့်လျှော့စျေးများကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ DeFi အကြွေစေ့တွင်အရောင်းအဝယ်များစွာရှိသည် - လူ ဦး ရေတိုးများလာနေသော crypto ချေးငွေဈေးကွက်တွင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအသုံးအဆောင်များရှိသည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံကျော်ဖြင့်အကဲဖြတ်မှုအရထိပ်ဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ AAVE DeFi အကြွေစေ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစမှအစပြုနိုင်သောစျေးကွက်တွင်ပျော်မွေ့နေခဲ့ပြီး ၄ လအတွင်း ၃၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ယခု Aave ကိုဝယ်ပါ
၈။ Synthetix (SNX)
Synthetix သည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသော DeFi ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်စင်မြင့်ပေါ်ရှိတိုကင်များကိုလဲလှယ်ခွင့်ပြုသည့်ရေနံဖြန့်ကျက်ထားသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှု၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ သို့သော် Synthetix ကိုထူးခြားစေသည်မှာ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ Synths ပိုင်ဆိုင်မှုများကို 'Synths' ပူစီနံမှခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Synths များသည်နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုခြေရာခံသည့်ဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများဖြစ်သည်။
Synths များကို cryptocurrencies၊ index များနှင့်အခြား real-world ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် Synthetix ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောလဲလှယ်မှုတွင်အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ Synths အားအပေါင်ပစ္စည်းပေးရန် SNX - မူလ Synthetix ၏ဇာတိလက္ခဏာဖြစ်သော SNX ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေး Synths တိုင်းသင်၏ SNX တိုကင်များကိုစာချုပ်တစ်ခုဖြင့်ချုပ်ထားလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် SNX တိုကင်သည်ကောက်ခံရရှိသောအခကြေးငွေများကို၎င်း၏ပိုင်ရှင်များထံသို့လည်းဖြန့်ဝေပေးသည်။ သင့်အား passive ဝင်ငွေကိုရရှိစေသည်။ ပလက်ဖောင်းအတွင်းရှိဤတရားဝင်အသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားခြင်း၊ SNX တိုကင်များဝယ်လိုအားမှာဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်သည်။ အဆိုပါလက္ခဏာသက်သေထားပြီးစျေးကွက်အရင်းအနှီး $2ဘီလီယံနှင့်အတူအကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြားထဲကတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောလေးလတာကာလအတွင်း SNX အကြွေစေ့၏တန်ဖိုးသည် ၁၂၀% ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယခု Synthetix ကိုဝယ်ပါ
Yearn.finance ကို Ethereum, stablecoins နှင့်အခြား altcoins လောင်းရန်အတွက်အထွက်နှုန်းမြင့်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၂၀ အစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ Ethereum အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုသော protocol သည်၎င်းအား Vaults ဟုခေါ်သည်။
Yearn.finance သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များအတွက် DeFi ၏သဘောတရားကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး၎င်းတို့ကိုအမြတ်အစွန်းအနည်းဆုံးဖြင့် ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဤ DeFi ပလက်ဖောင်းသည် YFI အမှတ်အသားစတင်ပြီးစျေးကွက်မှနောက်ထပ်အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ DeFi အကြွေစေ့သည်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံကျော်မြင့်မားသောစျေးကွက်ထဲတွင်ရှိသည်။
သို့သော်စုစုပေါင်းအကန့်အသတ်ရှိသည့်ဒင်္ဂါးပေါင်း ၃၆,၆၆၆ ခုသာရှိသည်။ ၎င်းသည် Defi စီမံကိန်း၏တန်ဖိုးကိုတိုးစေသည်။ စာရေးချိန်တွင် YFI အကြွေစေ့ကိုဒေါ်လာ ၄၂,၅၆၄ ဒေါ်လာဖြင့်စျေးကွက်ရှိရာစျေးကွက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အချက်က ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လမှာဒေါ်လာ ၁,၀၅၀ နဲ့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊
ယခု Yearn.finance ကိုဝယ်ပါ
၁၀။ PancakeSwap (ကိတ်မုန့်)
PancakeSwap သည်သင် exchange Ethereum နှင့်အဆင်ပြေ။ စျေးသိပ်မကြီးသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သော Binance Smart Chain တွင် BEP20 တိုကင်များလဲလှယ်ခွင့်ပြုသည်။ Uniswap နှင့်ဆင်တူသည်၊ ဤ DEX သည်ငွေထုတ်ချေးရန်အခွင့်အလမ်းများပြုလုပ်ရန်အလိုအလျောက်စျေးကွက်တင်သူစနစ်ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ PancakeSwap သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်၎င်း၏ဇာတိအမှတ်အသားဖြစ်သော CAKE ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများသည်တိုကင်များထပ်မံရရှိရန်ကမ်းလှမ်းထားသောငွေဖြစ်လွယ်သောရေကန်များအနက်မှတစ်ခုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုအစုရှယ်ယာဝင်နိုင်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်တရားစွဲဆိုထားသည့်အနိမ့်ကျသောအခကြေးငွေများသည် DeFi ၏စိတ်အားထက်သန်သူများစွာကိုဤပလက်ဖောင်းသို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ - အကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်စေသည်။ CAKE အမှတ်အသားသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်သိသိသာသာဈေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ Defi အကြွေစေ့သည်ယခုနှစ်တွင် ၀.၆၃ ဒေါ်လာဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီ ၂၆ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၃၃.၈၃ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်လေးလအတွင်းအမြတ် ၅၀၀၀% ကျော်ရရှိစေသည်။ စာရေးချိန်တွင် CAKE အမှတ်အသားသည်စျေးကွက်အရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ယခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသော DeFi crypto တိုကင်များဖြစ်သည်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါ၊ DeFi ဒင်္ဂါးများ၏လူကြိုက်များမှုကပိုမိုကျယ်ပြန့်သော DeFi ကဏ္ sector သည်ကျယ်ပြန့်သောဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်ရောက်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပရိုတိုကောတွေကတကယ့်ဝယ်လိုအားနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ထဲမှာနေရာတစ်ခုရှိနေကြောင်းပြသနေပါတယ်။
သူကပြောပါတယ်, ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ပံ့ပိုးဖြစ်ကြောင်းအများအပြားခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ DeFi တိုကင်များသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော DeFi ဂေဟစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော protocol များကိုအထောက်အကူပြုရန်နည်းလမ်းအဖြစ်တီထွင်ထားသည် - ၎င်းသည် DeFi ဖြစ်စဉ်ကိုအမြတ်ထုတ်ရန်သင့်အတွက်အခြားအခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ယနေ့စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးနေသောအကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းအချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။
ယခု PancakeSwap ကိုဝယ်ပါ
2021 အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများ
DeFi ပလက်ဖောင်းများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာဤအဖြေများသည်ရိုးရာဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပေးသည်။
ယနေ့အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည် Bitcoin သို့မဟုတ် Ethereum ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် dApps သို့မဟုတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော protocol များဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအတွက်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်ဘဏ္opportunitiesာရေးအခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောလတိုင်းနီးပါးစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောစီမံကိန်းအသစ်များရှိသည်။
ယနေ့တွင် dApps နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော protocol များအသုံးပြုနေသည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ချေးငှားခြင်းနှင့်ချေးငှားခြင်း DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်သင့်ကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများမှငွေချေးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင့်အနေဖြင့် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ရန်မလိုပဲသင်၏အကြွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းတို့မပြုလုပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်သင်၏ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ပြန်လည်ချေးယူနိုင်သည်။ DeFi ပလက်ဖောင်း၏ငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်: ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသော DeFi crypto ပိုက်ဆံအိတ်များသည်သင်၏လုံခြုံစိတ်ချရသောဝန်းကျင်ရှိသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လျှို့ဝှက်သော့များကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချလဲလှယ်ရေး: အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများကသင့်အားအလယ်အလတ် ၀ န်ထမ်းလိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားပြီးစမတ်စာချုပ်များမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ protocols များ: DeFi သည်သုံးစွဲသူများအားအလိုအလျှောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစုဆောင်းခြင်းကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များအတွက်ရန်ပုံငွေများစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်မူဘောင်များကိုထောက်ပံ့သည်။
အပေါင်ပစ္စည်းမဟုတ်သောချေးငွေများ DeFi သည်လုံခြုံမှုမရှိသောချေးငွေများကိုရွယ်တူချင်းတူတူရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Fungible မဟုတ်သောတိုကင်များ အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများက NFTs ကိုပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ ဤရွေ့ကား, သင် blockchain အပေါ်ယခင်က non-commodifiable ခဲ့သောပိုင်ဆိုင်မှု commodify ခွင့်ပြုကြောင်းတိုကင်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတွင်မူရင်းအနုပညာလက်ရာများ၊ သီချင်းသို့မဟုတ်တွစ်တာတစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အထွက်နှုန်း - ဤ DeFi ထုတ်ကုန်သည်သင့်အား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို DeFi platform ပေါ်တွင်လောင်းခြင်းဖြင့်သင့်အားအကျိုးပြုနိုင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း DeFi လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအတော်အတန်ကွဲပြားသည်။ Y0u သည်ငွေစုဘဏ်စာရင်းများ၊ ချေးငွေများ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ အာမခံနှင့်အခြားအရာများမှစိတ်ကူး။ ရသောမည်သည့်ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊
ထို့ကြောင့်ဤကဏ္ of ၏အလားအလာကောင်းသည့်လက္ခဏာများကိုသင်ရရှိနိုင်မည့်အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သနည်း။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းအဆင့်ပလက်ဖောင်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့မှသင်မည်သို့အကျိုးရရှိနိုင်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
2018 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်, YouHodler စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးဘက်ပေါင်းစုံ crypto ချေးငွေပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် crypto-fiat ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ DeFi ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံ။ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန်ဥရောပနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ရှိနာမည်ကြီးဘဏ်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Compound, DAI, Uniswap, Chainlink, Maker နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ထင်ရှားကျော်ကြားသော DeFi ဒင်္ဂါးများစွာကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်ကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူ YouHodler လည်းပေါင်းစည်းထားသည်။ YouHodler ၏မှတ်သားလောက်သောထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အမြတ်ငွေများအမြန်စတင်နိုင်ရန်အတွက် Bitcoin သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrencies ကိုသင်အပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။
ဤပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိငှားရမ်းခြင်းနှင့်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတစ်ခုစီသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသောတရားဝင်စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ crypto သိုက်များမှ ၁၂.၇% အထိရနိုင်သည်။ သင်ပြန်ပို့သမျှသည်သင်၏ YouHodler ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့အပတ်တိုင်းတိုက်ရိုက်ငွေသွင်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်စင်မြင့်ပေါ်ရှိ crypto ချေးငွေများကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။ YouHodler သည်အထင်ကြီးလေးစားရသောချေးငွေနှင့်အချိုးအစားကို ၉၀% ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးထောက်ပံ့ပေးသော cryptocurrencies ။
ယူအက်စ်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ဆွစ်ဖရန့်၊ ဗြိတိန်ပေါင်စသည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာချေးငွေများကိုလည်းသင်ရနိုင်သည်။ ချေးငွေများကိုသင်၏ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့ချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်သည်။ DeFi crypto market တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက် YouHodler သည်အခြားထုတ်ကုန်နှစ်ခုဖြစ်သော MultiHODL နှင့် Turbocharge ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များဖြင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကြွေးမျိုးစုံသို့အလိုအလျောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည်ဘဏ္functionalာရေးစျေးကွက်၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သောအတွေ့အကြုံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်သင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ passive ဝင်ငွေကိုသာရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေပါကသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုနေစဉ် YouHodler သည်သင့်ကိုအမြတ်များစွာရနိုင်သည်။
Nexo သည် crypto အာကာသတွင်ထင်ရှားသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းသည်ရိုးရာဘဏ်လုပ်ငန်းကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်အစားထိုးနိုင်သောဘဏ္financialာရေးထုတ်ကုန်များစွာကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Nexo သည် DAI နှင့် Nexo တိုကင်ကဲ့သို့သော DeFi ဒင်္ဂါးများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှု ၁၈ ခုပေါ်တွင်အတိုးရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ Cryptocurrencies အပေါ် ၈% အထိရနိုင်ပြီး၊ တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများပေါ်တွင် ၁၂% အထိရနိုင်သည်။
သင်၏ ၀ င်ငွေကိုသင့်အားနေ့စဉ်ပေးချေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်အမြတ်အစွန်းများဖြစ်သောယူရို၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ဗြိတိန်ပေါင်စသည့်ငွေကြေးများကိုလည်းပြန်သွင်းနိုင်သည်။ crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်အပြင် Nexo သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါင်ပစ္စည်းဖြင့်ချက်ချင်းချေးငွေများကိုလည်းရနိုင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်လုံးဝအလိုအလျောက်ဖြစ်သည် - သင်သည်သင်၏ချေးငွေတောင်းခံမှုကိုမည်သည့်ခရက်ဒစ်စစ်ဆေးမှုမှမလိုပဲဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ Nexo crypto ချေးငွေအတွက်အတိုးနှုန်း APR 5.90% မှာစတင်။ အနိမ့်ဆုံးချေးငွေပမာဏကိုဒေါ်လာ ၅၀ သတ်မှတ်ထားပြီးသင်ချေးငွေလိုင်းကိုဒေါ်လာ ၂ သန်းအထိရနိုင်သည်။ Nexo သည်ကိုယ်ပိုင်ရင်းမြစ် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်သင် cryptocurrency အတွဲ ၁၀၀ ကျော်ကိုသင်ရောင်းနိုင်၊ ရောင်းချနိုင်သည်။
မတူညီသောဖလှယ်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် platform သည် Nexo Smart System ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Nexo မှသင်စျေးကွက်ကိုမှာယူသောအခါစျေးနှုန်းအတက်အကျအနည်းဆုံးရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းကတိပေးထားသည်။ Nexo သည်အခြား DeFi ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့ပင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သော NEXO တိုကင်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
NEXO တိုကင်ကိုကိုင်ထားခြင်းကသင့်အားသင့်၏အပ်ငွေများအပေါ်အမြတ်အစွန်းများများနှင့်ချေးငွေအပေါ်အတိုးနှုန်းနိမ့်ခြင်းကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းပေါ်မှများစွာသောဆုလာဘ်များရရှိစေသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Nexo သည် token ကိုင်ဆောင်သူများအားခွဲဝေပေးသောပလက်ဖောင်းအနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒီ DeFi အကြွေစေ့ရဲ့အသားတင်အမြတ်ရဲ့ ၃၀% ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး NEXO token ကိုင်ဆောင်သူတွေကြားမှာဖြန့်ဝေထားတယ်။
Uniswap သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် cryptocurrency ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး DeFi platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ Platform သည်သင့်အား Metamask ကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် Ethereum-based ERC-20 တိုကင်ကိုကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Uniswap သည်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီယံကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၅၀၀၀% တိုးတက်လာတာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာ DeFi ပလက်ဖောင်းဘယ်လောက်အထိရောက်ပြီဆိုတာကိုပြနေပါတယ်။
Uniswap ၏အဓိကကောင်းကျိုးများတစ်ခုမှာသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပလက်ဖောင်းသို့ငွေသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်ဤသည်မှာစာအုပ်များအစားငွေဖြစ်လွယ်မှုပမာဏကိုအသုံးပြုသည်။ သင့်အနေဖြင့် Uniswap protocol တွင်စာရင်းသွင်းရန်သို့မဟုတ် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
မည်သည့် ERC20 အမှတ်အသားကိုမဆိုလဲလှယ်နိုင်သည် (သို့) ငွေရှင်းလွယ်ကူသောပမာဏထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အခကြေးငွေအနည်းငယ်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Uniswap တွင်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် UNI လက္ခဏာသက်သေရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပေးသူ၏ protocol အုပ်ချုပ်မှုတွင်မဲပေးခွင့်ရှိသည်။ DeFi အကြွေစေ့သည်မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီး UNI protocol ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက Uniswap သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးလဲလှယ်ရေးဗားရှင်းဖြစ်သော Uniswap V3 ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစုစည်းငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းနှင့်အခကြေးငွေအလွှာနှင့်အတူကြွလာ။ ဤသည်ကငွေချေးသူများအား၎င်းတို့စွန့်စားရသည့်အဆင့်နှင့်အညီလုပ်ခပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် Uniswap V3 ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အပြောင်းလွယ်ဆုံး AMM များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Uniswap ပရိုတိုကောသည်ဗဟိုဖလှယ်မှုများထက်ကျော်လွန်နိုင်သောနိမ့်ကျသောကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်လည်းရည်ရွယ်သည်။ ဤအသစ်ပြောင်းလဲမှုများသည် UNI DeFi လက္ခဏာသက်သေ၏စျေးနှုန်းကိုထပ်မံမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း DeFi ပလက်ဖောင်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်မကြာမီအခြားထုတ်ကုန်များဖြစ်သော crypto ချေးငွေများနှင့်၎င်း၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဂေဟစနစ်ကိုငွေချေးခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
2018 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်, BlockFi သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြီးထွားဖို့သွားလာရင်း - နေရာဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက် DeFi ပလက်ဖောင်းသည်ထင်ရှားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများထံမှဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးသစ္စာရှိသောဖောက်သည်နောက်လိုက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ BlockFi သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ cryptocurrency ကုန်သည်များအတွက်ပစ်မှတ်ထားသောငွေကြေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ BlockFi အတိုင်ပင်ခံများ၊ တိုတောင်းသော BIAS - သည် cryptocurrencies တွင်နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း ၈.၆% အထိရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
အခြား DeFi ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့။ BlockFi သည်ဤအသုံးပြုသူသိုက်များကိုအခြားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပွဲစားများကိုချေးပြီး ၄ င်းတို့ကိုအတိုးယူသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုပေးသည်။ သူကပြောကြားသည်မှာချေးငွေနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသုံးစွဲသူများအားအပ်ငွေများကိုပိုမို ဦး စားပေးသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
BlockFi သည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာရှိအပေါင်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၅၀% အထိငှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ဒီ YouHodler ကဲ့သို့သောအခြားပလက်ဖောင်းများကကမ်းလှမ်း LTV ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ချေးငွေများချက်ချင်းနီးပါးလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် BlockFi ၏အခြားအားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းတွင်ဖလှယ်မှုများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငွေလဲနှုန်းသည်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်ရရှိနိုင်သောပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံးနည်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် BlockFi သည်သင့်အားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို passive ဝင်ငွေရရှိရန်နှင့်၎င်းကိုဆန့်ကျင်လျှင်မြန်သောချေးငွေများကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ထိပ်တန်းအခြားငွေကြေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်သည်။
မူလက ETHLend အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်, Aave သည်တတိယပါတီသို့သွားစရာမလိုဘဲ crypto ချေးသူများနှင့်ငွေချေးသူများ၏စည်းကမ်းချက်များကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည့်စျေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ DeFi ပလက်ဖောင်းသည်ငွေရေးကြေးရေးထုတ်ကုန်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသောခိုင်မာသော DeFi protocol သို့ပြောင်းလဲလာသည်။ Aave ၏ငွေထုတ်ချေးစုစုပေါင်းသည် crypto၊ တည်ငြိမ်သောနှင့် DeFi ဒင်္ဂါး ၂၅ ခုအတွက်ထောက်ခံမှုပေးသည်။
DAI၊ Chainlink၊ yearn.finance၊ Uniswap, SNX, Maker နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် Aave သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည့် AAVE ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် token ကိုင်ဆောင်ထားသူများအား Aave protocol ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ AAVE တိုကင်သည်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန်စင်မြင့်ပေါ်တွင်လည်းလောင်းနိုင်သည်။
Aave သည် crypto-ချေးငွေပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့် AML သို့မဟုတ် KYC စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းစရာမလိုပဲ Aave တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုချေးငှား။ ချေးယူနိုင်သည်။ ငွေချေးသူအနေနှင့်သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငွေအရင်းအနှီးများထဲသို့အပ်နှံပါလိမ့်မည်။ DeFi ပလက်ဖောင်းအတွင်းရှိမတည်ငြိမ်မှုကိုဆန့်ကျင်ရန်ရေကန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားဖယ်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ငွေများကိုငွေထုတ်ချေးခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်လည်းပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ထို့အပြင်သင်ပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောငွေဖြစ်လွယ်မှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ငွေချေးယူလိုပါက Aave သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအလွန်အကျွံထည့်ခြင်းဖြင့်ချေးယူခွင့်ပြုသည်။ သင်ရရှိသောချေးငွေ၏ LTV သည် ၅၀ မှ ၇၅% အထိရှိသည်။
သို့သော်ဤအရာအပြင် Aave သည်အခြားထူးခြားသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သောလုံခြုံမှုမရှိသော crypto ချေးငွေများနှင့်နှုန်းထားပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်လည်းသူ့ဟာသူခွဲခြားသည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုဒီလမ်းညွှန်၏ 'Crypto Loans at DeFi Platforms' အပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ sထူးခြားသောအပေါင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများသည် Aave အား DeFi ကဏ္inတွင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒီအာကာသအတွင်းရှိအခြား DeFi protocols များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Aave ထူးခြားတဲ့ features တွေအာဆင်နယ်ကမ်းလှမ်း။
Celsius သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုတီထွင်ခဲ့သောနောက်ထပ် blockchain-based platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ CEL လက္ခဏာသက်သေသည် Celsius ဂေဟစနစ်၏ကျောရိုးဖြစ်သည်။ ဤသည် ERC-20 တိုကင်သည်၎င်း၏ဘဏ္financialာရေးထုတ်ကုန်များမှသင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအများဆုံးရရှိရန် Celsius protocol အတွင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အသုံး ၀ င်မှုအရ Celsius သည် ၁၇.၇၈% အထိအတိုးနှုန်းဖြင့်သင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတိုးရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှနှုန်းထက်များစွာမြင့်မားသည် - သို့သော် CEL တိုကင်များကိုသင်အမြင့်ဆုံးပြန်ရောက်ရန်လက်ခံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင့်လျော်သောငွေကြေးသို့မဟုတ်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငှားရန်အတွက် Celsius သည် cryptocurrency ကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
ဤတွင် ထပ်မံ၍ အတိုးနှုန်းမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ၁% APR သာသတ်မှတ်သည်။ ဤသည်မှာစင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်၌ CEL တိုကင်များလုံလောက်စွာရှိနေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်စင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်သင်ကိုင်ထားသည့် CEL ပမာဏအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် Celsius ကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်၏ cryptocurrency အစုစုတွင် CEL ကိုထည့်ပေါင်းခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကိုင်သောသူတို့ကို နှင့် အစုရှယ်ယာ CEL တိုကင်များသည်သူတို့၏အပ်ငွေများအပေါ်အမြင့်ဆုံးပြန်ပေးငွေများအပြင်ချေးငွေအပေါ်အတိုးနှုန်းလျှော့ချနိုင်သည်။ အရင်းအနှီးအမြောက်အများအရ CEL လက္ခဏာသက်သေသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစတွင် ၂၀% တိုးလာခဲ့သည်။ သို့သော် CEL လက္ခဏာသက်သေ၏အသုံးဝင်မှုသည် Celsius ဂေဟစနစ်၏အပြင်ဘက်တွင်ကန့်သတ်ထားသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
ဒြပ်ပေါင်းဘဏ္Financeာရေးကို DeFi ကဏ္inတွင်အကြီးမားဆုံးငွေချေးခြင်းပရိုတိုကောတစ်ခုအဖြစ်အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ယနေ့ဆွေးနွေးနေသောအခြား DeFi ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့ပင် Compound protocol သည် Ethereum blockchain တွင်တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းသည်အစ ဦး ပိုင်းတွင်ဗဟိုဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာသက်သေစတင်ခြင်းနှင့်အတူ Compound သည်လူထုအခြေပြုဗဟိုမှခွဲဝေထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းအနည်းငယ်လှမ်းလိုက်သည်။
စာရေးနေစဉ် Compound သည်ထင်ရှားသော DeFi တိုကင်များစွာပါဝင်သော crypto နှင့်တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါး ၁၂ ခုကိုထောက်ပံ့သည်။ Compound ရှိ crypto ချေးငွေသည်အခြားသော DeFi ပလက်ဖောင်းများနှင့်ဆင်တူသည်။ ငွေချေးသူအနေနှင့်သင်လုပ်နိုင်သည် အသကျမှေး ပလက်ဖောင်းအတွက်ငွေဖြစ်လွယ်ထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ရန်ပုံငွေအပေါ်အကျိုးစီးပွား။ ငွေချေးသူအဖြစ် - သင်ကချေးငွေများကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည် ပေးဆောင်ခြင်း အကျိုးစီးပွား။
သို့သော်မင်းသမီးတစ်ခုလုံးကို cToken Contract ဟုခေါ်သောထုတ်ကုန်အသစ်မှတစ်ဆင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဤရွေ့ကား EIP-20 သည်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ကိုယ်စားပြုချက်များဖြစ်သည် - သင်အပ်နှံသို့မဟုတ်ထုတ်ယူလိုက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးကိုခြေရာခံသည်။ Compound protocol ၏ငွေပေးငွေယူသည် cToken Contract များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပျက်သည်။ သင်ကသူတို့ကိုအတိုးရရန်နှင့်ချေးငွေရရှိရန်အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ctokens တွင်သင်၏လက်ကိုရရန်သို့မဟုတ် Compound protocol မှတဆင့်၎င်းတို့ကိုငှားရန် 'mint' လုပ်နိုင်သည်။
Compound သည်စင်မြင့်ပေါ်ရှိအတိုးနှုန်းကိုသတ်မှတ်သည့်ရှုပ်ထွေးသော algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားသော DeFi ပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူဘဲ၊ protocol အတွင်းရှိရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ အတိုးနှုန်းမှာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည့် COMP - Compound သည်ပြီးပြည့်စုံသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးကိုအောင်မြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် DeFi ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မဲပေးခွင့်နှင့် COMP ကိုင်ဆောင်သူများအားမက်လုံးပေးခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
MakerDAO သည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုမျက်စိကျစေသောပထမဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီစီမံကိန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီဂျစ်တယ် Vault စနစ်မှာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားတယ်။ သငျသညျ Ethereum-based cryptocurrencies အများအပြားအပ်နှံနှင့်ပလက်ဖောင်း၏ဇာတိလက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည့် DAI ကိုသုံးနိုင်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း DAI ၏တန်ဖိုးသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်တန်ပြန်သည်။ MakerDAO တွင်သင်ထုတ်လုပ်သော DAI သည်ချေးငွေထုတ်ချေးရန်အတွက်အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သို့သော်၊ ERC-20 အမှတ်အသားကို DAI သို့ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်အခမဲ့မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင် Vault ကိုဖွင့်သောအခါသင်ပြုလုပ်သူအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။ ဤအခကြေးငွေသည်ရံဖန်ရံခါသတိထားရလွယ်ကူပြီးစင်မြင့်ပေါ်တွင်အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်လိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင် Maker Vaults ကိုအသုံးပြုနေပါကဖျက်သိမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်သင်၏ငွေစုငွေချေးနှုန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးထားရှိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
MakerDAO ဂေဟစနစ်အပြင်ဘက်တွင်အခြား DeFi အကြွေစေ့များအဖြစ် DAI လုပ်ဆောင်သည်။ သင်ကငွေချေးနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် passive ဝင်ငွေရဖို့သုံးနိုင်တယ်။ မကြာသေးမီအချိန်က DAI သည် NFT ၀ ယ်ယူမှုများ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် eCommerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ DAI မှလွဲ၍ MakerDAO တွင် Maker တွင်နောက်ထပ်အုပ်ချုပ်မှုငွေကြေးရှိသည်။ အခြား DeFi ဒင်္ဂါးများကဲ့သို့ Maker ကိုကိုင်ဆောင်ခြင်းသည်သင့်အားမဲပေးခွင့်နှင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကျသင့်သောအခကြေးငွေများကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် platform များသည်ယနေ့တည်ဆောက်နေသည့် DeFi ကွန်ယက်ကိုတစေ့တစောင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ DeFi ကဏ္ sector ၏အနာဂတ်ကိုနောက်ကွယ်ရှိရပ်ရွာလူထုကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းသည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ဆွဲဆောင်ပါက၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာ DeFi အကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းတွင်ထင်ဟပ်သင့်သည်။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း DeFi လောကဟာငွေကြေးကဏ္ sector ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ဤထိပ်တန်း DeFi ပလက်ဖောင်းများသည် Blockchain နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ တစ်ဖန်သင်သည်သင်၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
DeFi သည်အနာဂတ်တွင်လွှမ်းမိုးရန်ကြီးမားသောအလားအလာရှိသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ DeFi အကြွေစေ့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ cryptocurrency နေရာအသစ်သို့ရောက်ရှိသူများအတွက်ဤinရိယာတွင်လမ်းညွှန်မှုအနည်းငယ်မှသင်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ အောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း၌အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးများကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်ဆိုသည့်လမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားပါသည်။
ယခုအချိန်တွင်သင့်အား DeFi ပလက်ဖောင်းများနှင့်လက်ရှိစျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးနေသော DeFi ဒင်္ဂါးပြားများအကြောင်းခိုင်မာသောစိတ်ကူးရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသော DeFi ဒင်္ဂါးပြားများကိုအလုံခြုံဆုံးနှင့်အကုန်အကျသက်သာစွာဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်စေရန်အောက်ပါတို့မှသင့်အားလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုသင်လှည့်ပတ်သွားပါမည်။
အဆင့် ၁ - အွန်လိုင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောပလက်ဖောင်းများကသင့်အားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ သို့သော်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပိုမိုသတိထားလိုသူများအတွက်သင်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် ပလက်ဖောင်း။ ဥပမာ DeFi အကြွေစေ့တစ်ခုကိုသင်ဝယ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာ cryptocurrency မှတဆင့်ဖြစ်သည် လဲလှယ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှတဆင့် ပှဲစား.
အကယ်၍ သင်သည်ဗဟိုမှသို့မဟုတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါက DeFi ဒင်္ဂါးများကို Fiat ငွေကြေးနှင့်လဲလှယ်ရန်အဆင်ပြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ USDT ကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများကိုငွေပေးချေရပါလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်သည် Capital.com ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းစည်းမျဉ်းများကိုရွေးချယ်ပါက Defi ဒင်္ဂါးများကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်၏အကောင့်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ယူရို၊
တကယ်တော့သင်ဟာငွေကွေးကို debit / credit card နဲ့ Paypal လို e-wallet တစ်ခုခုနဲ့ချက်ချင်းငွေသွင်းနိုင်တယ်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက် Capital.com သည်လူကြိုက်များသော CFD အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး UKA မှ FCA နှင့် CySEC ဆိုက်ပရပ်စ်တို့မှထိန်းချုပ်သည်။
LINK, UNI, DAI, 0x နှင့်စသည်တို့ကဲ့သို့သော DeFi အကြွေစေ့စျေးကွက်များ၏ရှည်လျားသောလိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်သည်အထဲတွင်ပါ ၀ င်သောပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမကမ်းလှမ်းပါကသင်၏ DeFi Tokens များကိုသိမ်းဆည်းရန်ပြင်ပဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလည်းသင်ရှာဖွေချင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကို passive ဝင်ငွေရရှိရန် DeFi ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်မလောင်းပါက၎င်းသည်သေချာပါသည်။
အဆင့် ၂ - သင်ရွေးချယ်ထားသော DeFi Trading Site ဖြင့်စာရင်းသွင်းပါ
DeFi အကြွေစေ့ရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သင်လုပ်ရန်မှာလျင်မြန်စွာမှတ်ပုံတင်ပုံစံကိုဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေထိုင်ခွင့်လိပ်စာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Capital.com ကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုနေပါကသင်သည်သင်၏ KYC လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဲ့သို့သောအထောက်အထားအထောက်အထားတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဤအဆင့်ကိုချက်ချင်းပြီးစီးနိုင်သည်။ Capital.com တွင်သင်ဤအဆင့်ကိုပြီးအောင် ၁၅ ရက်ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုမအောင်မြင်ပါကသင်၏အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းထားလိမ့်မည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြီးအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်သည် DeFi စျေးကွက်များစွာသို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်သည် - အားလုံးသည်ကော်မရှင်အနေဖြင့်သာဖြစ်သည်။
အဆင့် 3: သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့်ရန်ပုံငွေ
သင် DeFi ဒင်္ဂါးများကို Capital.com တွင်မရောင်းမီသင်၏အကောင့်ကိုရန်ပုံငွေယူရမည်ဖြစ်သည်။
Capital.com တွင်၊ သင်သည်ဤသို့ပြုနိုင်သည် - ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းသို့မဟုတ် ApplePay, PayPal နှင့် Trustly စသည့်အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ Capital.com သည်သိုက်ကြေးမကောက်ခံပါ။ သင်၏အကောင့်ကို $ / £ 20. ဖြင့်သာရန်ပုံငွေထည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ငွေသွင်းလျှင်၊ အနည်းဆုံးဒေါ်လာ / ပေါင်ထည့်ရမည်။ 250 ။
အဆင့် ၄ - သင်ရွေးချယ်ထားသော DeFi Coin Market ကိုရှာပါ
သင်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးလျှင် DeFi ဒင်္ဂါးများကိုစတင်ရောင်းဝယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ Capital.com တွင် - ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသော DeFi အကြွေစေ့ကိုရှာဖွေပြီးတက်လာသည့်ရလဒ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဥပမာ Uniswap ကိုသင်ရောင်းလိုပါက '' UNI '' ကိုရှာဖွေဘားသို့ထည့်နိုင်သည်။
အဆင့် ၅ - DeFi ဒင်္ဂါးများရောင်းဝယ်ပါ
ယခုသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်ကုန်သွယ်လိုသော DeFi တိုကင်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နည်းအနေဖြင့်သင်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုလည်း Defi coin တွင်ထည့်နိုင်သည်။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို၊ သင် Capital.com ၌အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ - Defi ဒင်္ဂါးများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် Capital.com သည်သင့်အားကော်မရှင်တစ်ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အခကြေးငွေမယူပါ။
သင်၏ဘဏ္goalsာရေးရည်မှန်းချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးများကိုသင်ဝယ်ယူပြီးလျှင်စားပွဲပေါ်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်၎င်းတို့ကိုကိုင်ထားနိုင်သည်၊ ကုန်သွယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် DeFi protocol သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည် DeFi ဒင်္ဂါးပြားများကိုလောင်းကြေးသို့မဟုတ်အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ချေးငွေများထုတ်ယူနိုင်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်စျေးကွက်အတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်စီမံပြီးဖြစ်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်နေရာသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းတစ် ဦး တည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအနှီးများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်တွင်အဆတိုးများပြားလာသည်။ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်အတိုင်း DeFi ၏အားသာချက်များကိုအများပြည်သူထံယူဆောင်လာနိုင်မည့်ပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်။
များစွာသောအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များတွင် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအကြားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အထူးသဖြင့်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား DeFi ပလက်ဖောင်းများကကမ်းလှမ်း crypto ငွေစုအကောင့်များနှင့် crypto ချေးငွေများ။
ထို့ကြောင့်၊ ဤလမ်းညွှန်၏နောက်အခန်းများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပလီကေးရှင်းများကိုလေ့လာမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြီးထွားစေရန်၎င်းတို့မှမည်သို့အားသာချက်ယူနိုင်သည်ကိုလေ့လာလိမ့်မည်။
DeFi ပလက်ဖောင်းများရှိ Crypto ငွေစုငွေစာရင်းများ
အစောပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည် crypto ဝါသနာရှင်များအတွက်စီတန်းထားသောငွေရေးကြေးရေးထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောဖြစ်နိုင်ခြေများအရ crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်စိတ်ကူးသည်အများဆုံးအာရုံစိုက်မှုရနေပုံရသည်။ crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်ဆိုသည်မှာအတိအကျဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်သင့်လျော်သောအကျိုးအမြတ်များရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
သို့သော်၊ ရိုးရာဘဏ္systemsာရေးစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်သင့်ငွေသွင်းငွေများအတွက်အတိုးနှုန်းများစွာပေးသည်။ သငျသညျ crypto ငွေစုအကောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်မီ, စက်မှုလုပ်ငန်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Crypto ငွေစုအကောင့်များသည်သံဖြူပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏ cryptocurrencies အတွက်ငွေစုစာရင်းဖြစ်သည်။ Fiat ငွေကြေးများကိုသမားရိုးကျဘဏ်တစ်ခုသို့အပ်နှံမည့်အစားသင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို DeFi ချေးငွေပလက်ဖောင်းထဲသို့ထည့်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်သည်သင်၏အပ်ငွေများအပေါ်အတိုးရနိုင်သည်။
အမှန်ကတော့, သင်လုပ်နေတာကတူညီတဲ့ပလက်ဖောင်းရဲ့ crypto ချေးငှားသူတွေကိုသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချေးတာပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငှားရန်အတိုးပေးကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်များသည်အကောင်းဆုံး Defi ပလက်ဖောင်းများမှရရှိသောသက်တူရွယ်တူအချင်းချင်းချေးငွေများကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဗဟိုမှငွေချေးသည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် - သင်သည်ငွေစုအကောင့်တစ်ခု၏အားသာချက်ကိုယူရန်ခက်ခဲသော KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ထို့အပြင်ကမ်းလှမ်းသည့်အတိုးနှုန်းကိုကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, DeFi ပလက်ဖောင်းများသည် protocol များအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့် KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်မလိုဘဲလူတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အကောင့်တွေဟာယဉ်ကျေးမှုကင်းမဲ့တယ်၊ ဆိုလိုတာကသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်လွှဲအပ်စရာမလိုဘူး။ ထို့ကြောင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောချေးငွေပလက်ဖောင်းများနှင့်သူတို့ပေးသောငွေစုအကောင့်များသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည်အတိုးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ကိစ္စရပ်အများစု၌အကောင်းဆုံး DeFi ချေးငွေပလက်ဖောင်းများသည်သက်ဆိုင်ရာ protocol ပေါ်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအတွက်ဝယ်လိုအားအပေါ် အခြေခံ၍ အတိုးနှုန်းအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ငွေချေးယူသူသည် DeFi platform မှတစ်ဆင့်ချေးငွေကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်၏နောက်အခန်းတွင်ငွေချေးသူများ၏ရှုထောင့်မှ crypto ချေးငွေများအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, DeFi ချေးငွေ၏စိတ်ကူးသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ငွေချေးသူများအတွက်အတိုးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားနိုင်သော်လည်းအလားအလာရှိသောအတည်ပြုချက်မရှိခြင်းကြောင့် DeFi ပလက်ဖောင်းများသည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။
အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများတွင်သင်သည် 'အထွက်နှုန်းမွေးမြူခြင်း' ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အကျိုးစီးပွားရရှိရန် ERC-20 တိုကင်များ၏လောင်းကြေးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဖြစ်ရပ်များစွာတွင် crypto စုဆောင်းငွေစာရင်းနှင့်အထွက်နှုန်းမွေးမြူရေးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထိုအရာများဖြင့်ပြောရလျှင် DeFi ပလက်ဖောင်းကိုသင်ဖြတ်သန်းသွားသောအခါသင်သည်ငွေထုတ်ချေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုသွင်းသောအခါ၎င်းတို့သည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုပမာဏထဲသို့ပေါင်းထည့်လိမ့်မည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောချေးငွေပလက်ဖောင်းများသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သော protocol များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Compound နှင့် Aave ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည် - ၎င်းသည်မည်သူမဆိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော DeFi ပလက်ဖောင်းများရှိအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုစမတ်စာချုပ်များ (Liquidity Pools) မှတဆင့်ဆောင်ရွက်သည်။
၎င်းသည်ချေးငွေနှင့်ချေးငှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်သေချာစေသည်။ ပလက်ဖောင်းမှသတ်မှတ်ထားသောကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှသာစမတ်စာချုပ်များသည်ငွေပေးငွေယူကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် DeFi ငွေစုအကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါအရင်းအနှီးကိုစမတ်ကျသောစာချုပ်တစ်ခုသို့ပို့လိုက်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်သည်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများတွင်ဤစမတ်စာချုပ်များကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပြီးအများပြည်သူသိရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အတိုင်း - အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်သင်အနည်းငယ်သောကုဒ်ပညာဗဟုသုတလိုအပ်နိုင်သည်။
ယနေ့သင်သည် crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်ကိုဖွင့်ရုံတင်မကဘဲ ERC-20 တိုကင်များနှင့်တည်ငြိမ်သောအကြွေစေ့များကိုလည်းအတိုးရနိုင်သည်။
DeFi platform တွင် crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်ကိုဖွင့်သင့်သလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်း crypto ငွေစုစာရင်းဖွင့်ခြင်း၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာအတိုးရရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်တွင်သိမ်းဆည်းထားမည့်အစားသင်ထုတ်ချေးသည့်အရာထက် ပိုမို၍ crypto ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုမချီရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ပြန်လည်ပေးပို့မှုကိုသင့်အား passive အခြေခံဖြင့်ပေးလိမ့်မည်။
သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် DAI ကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်သောငွေများကိုချေးရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်သမားရိုးကျ cryptocurrencies နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မတည်ငြိမ်မှုအန္တရာယ်မရှိဘဲသင်၏အရင်းအနှီးကြီးထွားမှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် DeFi ပလက်ဖောင်းများစွာသည်သင့်အားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလက္ခဏာများကိုဝေမျှခွင့်ပြုသည်။
crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်များသည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောကဏ္aspectsများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အောက်ဖော်ပြပါဥပမာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သင်၏ Ethereum ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်ကိုဖွင့်ရန်သင်မျှော်လင့်နေသည်ဆိုပါစို့။
သင်၏ crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်ကိုဖွင့်ရန်သင်ရွေးချယ်ထားသော DeFi platform သို့သွားသည်။
သင်၏ DeFi ပလက်ဖောင်းကိုသင်၏ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
ချေးငှားနိုင်သောဒင်္ဂါးများ၏စာရင်းမှ Ethereum ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအတည်ပြုပါ။
ပလက်ဖောင်းများစွာတွင်ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးငွေယူများသည်သင့်အားဓာတ်ငွေ့ခပေးမည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ crypto စုဆောင်းမှုအကောင့်ကိုမတည်ထောင်မီပါဝင်ပတ်သက်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကလေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း - သင် cryptocurrencies လောင်းသောအခါ, သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ crypto ပေးသောသူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဤ DeFi ပလက်ဖောင်းအများစုသည် crypto ချေးငွေများကိုပေးသည်။ အခြားသူများကသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချေးယူခွင့်ရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုငွေစုအကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းမည့်အစားအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္တွင်အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများတွင် crypto ချေးငွေများမှသင်မည်သို့အကျိုးရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။
DeFi ပလက်ဖောင်းများရှိ Crypto ချေးငွေများ
အကယ်၍ သင်သည် crypto ဝါသနာရှင်များဖြစ်လျှင် 'buy and hold' မဟာဗျူဟာ၏သဘောတရားနှင့်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သင်သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို 'HODLing' လုပ်သောအခါသင်ငွေထုတ်ပေးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မချင်း၎င်းတို့အားလုံခြုံသောပိုက်ဆံအိတ်တွင်သင်လုံခြုံစွာထားရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ဒင်္ဂါးများကိုသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်ထိုင်။ ထားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။
Crypto ချေးငွေများနှင့်ချေးငွေပလက်ဖောင်းများသည်ဤအတွက်အခြားအဖြေတစ်ခုကိုပေးသည် - ထိုနေရာတွင်သင်သည်သင်၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက်ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် crypto ချေးငွေသည်ငွေစုငွေစာရင်းများ၏ပြောင်းပြန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်သည်ငွေချေးသူဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်အတိုးများရယူခြင်းအစားသင်၏အကြွေးဝယ်ယူရန်အတွက်သင်၏ cryptocurrencies ကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးအတွက်မဆိုငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုလက်လှမ်းမီခြင်းသည်အဓိကစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမည်သည့်အချိန်၌မဆိုငွေသားထုတ်ယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်အစဉ်အလာလုံခြုံရေးနှင့်မတူဘဲ၊ cryptocurrency စျေးကွက်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။
မင်းမှာ BTC ၁၀ ခုရှိတယ်လို့မင်းတို့စိတ်ကူးကြည့်ကြစို့။
လက်ရှိစျေးကွက်ကိုကြည့်လျှင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်မရောင်းလိုပါ။ အကြောင်းမှာရေရှည်တွင် BTC စျေးနှုန်းများသိသိသာသာမြင့်တက်လိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် crypto ကိုမချချင်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နောင်နောင်တွင်ပြန်လည် ၀ ယ်သောအခါ Bitcoin နည်းပါးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤတွင် crypto-ချေးငွေပလက်ဖောင်းများကစားခြင်းသို့ရောက်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် crypto သို့မဟုတ် fiat ငွေကြေးဖြင့်ပေးသောချေးငွေကိုသင်ရရှိရန်သင်၏ Bitcoin ကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် cryptocurrency ဒင်္ဂါးများ၏မတည်ငြိမ်သောသဘောသဘာဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကသင်ရရှိသောချေးငွေ၏တန်ဖိုးထက် BTC ကိုပိုမိုအပေါင်ထားရန်လိုလိမ့်မည်။
Tပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော crypto ချေးငွေများသည်သင့်ကိုမဖြစ်မနေပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် DeFi ပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Nexo တွင်, သင်သည် 5.9% APR ကနေ crypto ချေးငွေကိုရရှိနိုင်သည်။ BlockFi တွင်မူအတိုးနှုန်းကို ၄.၅% အထိရနိုင်သည်။
သင်အတိုးနှင့်အတူချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ပြန်ရောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါကသို့မဟုတ်သင်၏အပေါင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကျဆင်းသွားပါကသင်၏ crypto သိုက်များသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ထပ်မံအာမခံငွေထပ်ထည့်ရမည်။
crypto ချေးငွေ၏အဓိကကောင်းကျိုးတစ်ခုမှာသင်သည်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်စစ်ဆေးခြင်းများခံယူခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ရိုးရာဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် - crypto ချေးငွေသည်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အကြွေးသမိုင်းသို့မဟုတ်ဝင်ငွေအပေါ်အခြေခံပြီးစစ်ဆေးမှုများမှဘာသာရပ်မလိုအပ်ပါ။ အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်ချေးငွေဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
အပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲ DeFi Crypto ချေးငွေများ
ဗဟို crypto ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်ထားရန်လိုအပ်သော်လည်းသင်ငွေချေးစရာမလိုဘဲချေးငွေများပေးသည့် DeFi ပလက်ဖောင်းများကိုလည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ မည်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်လုံခြုံမှုမရှိသော crypto ချေးငွေများဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ရေတိုငွေထုတ်ချေးမှုကိုပေးသည်။
ဥပမာ Aave သည်အကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့် Aave သည် Flash ချေးငွေများကိုသင်ရရှိသည် - ထိုကြောင့်သင်သည်မည်သည့်အာမခံပစ္စည်းကိုမျှပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်တစ်ခုတည်း blockchain ငွေပေးငွေယူအတွင်းချေးငွေပြန်ဆပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံမှုမရှိသော crypto ချေးငွေများသည်အဓိကအားဖြင့် developer များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကချေးငွေတစ်ခုတောင်းခံရန်နှင့်ငွေပေးချေမှုကိုအတူတူပင်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် smart contract ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်မည်သည့် collat ​​မပါဘဲ crypto ချေးငွေများ၏အားသာချက်ကိုယူရန်ရှာလျှင်ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မှုရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။
DeFi Crypto ချေးငွေပလက်ဖောင်း
သင်သိသည်နှင့်အမျှအကောင်းဆုံး DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းခံရပြီးအသွင်ကူးပြောင်းမှုများကိုလူတို့ကိုင်တွယ်မည့်အစားအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာ Aave နှင့် Compound တို့ကဲ့သို့ DeFi ပေးသူများအနေဖြင့် smart contract များအသုံးပြုပြီး၎င်းသည် protocols များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအလိုအလျောက်ချေးငွေများကိုဖန်တီးပေးသည်။
ထို့အပြင်ဤ protocol များသည် blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသကဲ့သို့လုံးဝပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ ဗဟိုပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူသည်မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ရန်မလိုပဲ crypto ချေးငွေများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် crypto ချေးငွေကို Fiat ငွေကြေး၊ DeFi ဒင်္ဂါးများသို့မဟုတ် USDT ကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်သောငွေများဖြင့်ရနိုင်သည်။
DeFi Crypto ချေးငွေများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
အခိုးအငွေ့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်၊ crypto ချေးငွေသည်လက်တွေ့အသုံးအနှုန်းများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဥပမာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။
သင်သည်သင်၏ BTC ဒင်္ဂါးများကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု၍ crypto ချေးငွေကိုယူလိုသည်ဆိုပါစို့။
သင်က UNI မှာငွေချေးချင်တယ်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် UNI တစ်ခု၏လက်ရှိစျေးနှုန်းကို BTC သို့ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးအရ UNI တစ်ခုသည် ၀.0.00071284 BTC နှင့်ညီမျှသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့် crypto ပံ့ပိုးသူသည်သင့်အားအတိုးနှုန်း 5% ပေးသည်။
၂ လအကြာ, သင်ကချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ရန်နှင့်သင်၏ Bitcoin ကိုရွေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် UNI တွင်ချေးငွေပမာဏနှင့်အတိုး ၅% ကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ချေးငွေကိုပြန်ဆပ်သည်နှင့်သင်၏ Bitcoin အပ်ငွေကိုသင်ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ ဤဥပမာတွင်သင်၏ Bitcoin ကိုရောင်းစရာမလိုဘဲ UNI ၌သင်ချေးငွေရရှိခဲ့သည်။ အရောင်းအဝယ်၏အခြားတစ်ဖက်တွင် crypto ချေးငွေသည်သူတို့၏မူလ UNI အပြင်အတိုး ၅% ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်, ကအကောင့်သို့ cryptocurrency စျေးကွက်ကိုယ်တိုင်က၏မတည်ငြိမ်မှုကိုယူရန်အရေးကြီးပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင် Over- အပေါင်ပစ္စည်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဥပမာ MakeDAO တွင် - သင်သည်သင်၏ချေးငွေတန်ဖိုး၏အနည်းဆုံး ၁၅၀% တန်သောသိုက်တစ်ခုကိုထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါဆို UNI ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ချေးချင်တယ်ဆိုပါစို့။ MakerDAO တွင် - သင်သည်ချေးငွေရရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ တန် BTC ကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အပ်နှံရပါလိမ့်မည်။
BTC သိုက်၏တန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ အောက်ကျပါကဖျက်သိမ်းငွေကိုသင်ပေးရမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, crypto ချေးငွေများ DeFi အာကာသမှသင်အကျိုးခံစားရန်အဘို့အအထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားငွေဖြစ်လွယ်မှုများကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီစေရုံသာမကရိုးရာဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်သန်းရန်မလွယ်ကူပေ။
အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြားများ - အောက်ခြေလိုင်း
နောက်ဆုံးတွင် DeFi ၏စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် DeFi ပလက်ဖောင်းများသည်ဘဏ္worldာရေးကမ္ဘာ၏စမ်းသပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှယနေ့ခေတ်ကြီးမားသည့်ဂေဟစနစ်အထိကြီးထွားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်နယ်ပယ်ကဏ္ as တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သော်လည်း DeFi application များကိုမကြာမီပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ကလက်ခံလိမ့်မည်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် DeFi ၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်ဘဏ္financeာရေးထဲသို့စီးဝင်သွားလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့် DeFi သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းဘဏ္worldာရေးကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အလားအလာရှိသည်။
သို့သော်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်မှာမျှတမှုအသစ်ရှိနေသေးသည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကဲ့သို့ပင်ဤနေရာတွင်အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်များရှိနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်အားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာပြီးဤဘဏ္financialာရေးစနစ်ငယ်ရွယ်ပုံပြောင်းလဲပုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
DeFi သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေးကိုဆိုလိုသည် - ၎င်းမှာဗဟိုအာဏာပိုင်မရှိသောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆိုလိုသည်။ သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ပေးရန်ယနေ့ငွေရေးကြေးရေးပလက်ဖောင်းအများစုကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသာအုပ်ချုပ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ DeFi ပလက်ဖောင်းသည် blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ protocol ဖြင့်လည်ပတ်သည်။ cryptocurrencies ကဲ့သို့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။
DeFi သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောကဏ္ sector တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့သင်သည်အလိုအလျောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော DeFi ပလက်ဖောင်းများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း၊ ချေးငှားခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသောအခြားအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။
DeFi ပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် DeFi တိုကင်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ protocol ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုကူညီလိမ့်မည်။ ဤဇာတိတိုကင်ရှိသူများသည်သက်ဆိုင်ရာ DeFi ဂေဟစနစ်တွင်မဲပေးခွင့်ကိုရနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး DeFi ဒင်္ဂါးပြားတွေကဘာတွေလဲ?
အကောင်းဆုံး DeFi တိုကင်များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစတွင်လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ အရေးအသားရေးသားသည့်အချိန် - စျေးကွက်အရင်းအနှီးအရအကောင်းဆုံး DeFi တိုကင်များတွင် UNI, LINK, DAI, ZRX, MKR, COMP နှင့် CAKE တို့ပါဝင်သည်။
အကောင်းဆုံး DeFi အကြွေစေ့ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုပစ္စည်းနှင့်မဆို DeFi အကြွေစေ့သည်သင့်အားအမြင့်ဆုံးအမြတ်ငွေရရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မည်သို့ဆိုစေ DeFi protocols များအကြောင်းနှင့်သူတို့၏အသုံးပြုမှုကိစ္စများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သင် DeFi စျေးကွက်ကိုပိုမိုနားလည်စေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Soft Launch မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Token Now“ DeFi Coin” ကိုဝယ်ပါ။
ယခု DeFi Coin ကိုဝယ်ပါယခု DeFi Coin ကိုဝယ်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီသောတိုကင်ကိုယခုဝယ်ပါ။
DeFiCoins.io သည်သင့်အားမှန်ကန်သောစီမံကိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်သင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ၀ င်ငွေရှာဖွေနိုင်သောအသိပညာဗဟုသုတများကိုပေးအပ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။
DeFi Coins သည်စာဖတ်သူများအား DeFi စျေးကွက်၏နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီအောင်ထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာနယ်လစ်များနှင့်သုတေသီများသည်စေ့စေ့စပ်စပ်သုတေသနပြုပြီးသင့်အားအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
DeFi ကဏ္ sector သည်ကြီးမားစွာဖောင်းပွလာသည်နှင့်အမျှ DeFi ဂေဟစနစ်တွင်အလုပ်လုပ်သောတိုကင်အားလုံးသည်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်လာသောနေရာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားထိုအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေသည်။
Bitcoin BTC compound Cream ဘဏ္.ာရေး crypto ဘဏ္Financeာရေး Curve ကွှေး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနည်းပညာ Defy DEX Ethereum ပျင်းရိဘဏ္Financeာရေး IRS ကို ပီဇာ Strelka Vaults uni ဖြူဖြူ နှစ်သစ်ကူး Yearn.Finance စျေး YFI YFI ကျဆုံးခြင်း
နင် မူပိုင်ခွင့်© 2021 ။